Sabir Molou Efa eo anivon’ny ankohonany
Fanafihan-jiolahy Olona roa naratra mafy tao Vatofotsy Antsirabe
Nitrangana fanafihan-jiolahy indray tao Mahafaly Vatofotsy ny alin’ny alarobia 9 janoary 2019 lasa teo. Olona mpianaka no naratra mafy sy manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitalin’Andranomadio vokatr’izany.
Fanafihana “Cash point” teny Ambodin’Isotry Voaroba ny vola 4 tapitrisa ariary
Taorian’ny fandrobana ireo toeram-pivarotam-panafody teto an-drenivohitra dia manomboka mahita faisana indray amin’izao ireo “cash point”
NISY NANAFIKA NY LOOKS
Nisy nanafika ny looks etsy Andravoahangy. Saingy voasambotra io farany rehefa nisy nahita fa basy kilalao no nampiasainy.
Fakana an-keriny Miharatsy laza i Madagasikara
Loza amin’atambo no ateraky ny fakana an-keriny hanaovana fampihorohoroana ny takalon`ny aina amina vola. Tsy fantatra intsony izay tena marina sy ao ambadik`io fomba ratsy io.
Loza amin’atambo no ateraky ny fakana an-keriny hanaovana fampirohoroana ny takalon`ny aina amina vola. Tsy fantatra intsony izay tena marina sy ao ambadik`io fomba ratsy io.
Zandary namoy ny ainy Natao veloma farany tetsy amin`ny toby Ratsimandrava
Notanterahina omaly alakamisy 13 desambra tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro teny amin’ny toby Ratsimandrava, ny fanaovam-beloma ara-miaramila ny vatana mangatsiakan’ny zandary kilasy voalohany Razafimanjaka Tsilefy sy zandary kilasy faharoa Ravalosoa Marcelin,